Maalinta: Oktoobar 5, 2018
Basaska Dawlada Hoose ee Denizli, 07 Oktoobar 2018 waxaa lagu qaban doonaa Axadda Xulashada Xulashada Dadweynaha Dadweynaha (KPSS) ayaa xor u ah inay galaan. 07 ee Denizli Oktoobar 2018 wuxuu qaadan doonaa KPSS Axadda [More ...]
Mushaharka KPSS ee Eskisehir Bilaash
Dowlada Hoose ee Magaalada Eskişehir ayaa ku dhawaaqday in gaadiidka dadweynaha ay lacag la’aan ku noqon doonaan musharixiinta qaadan doona Imtixaanka Xulashada Dadweynaha 7-da Oktoobar 2018. Bayaanka oo muujinaya dukumintiga gelitaanka imtixaanka [More ...]
Shaqooyinka Waddada Sideedka ah ee Turgutlu Bridge Isbedelka La bilaabay
Dowladda Hoose ee Manisa ee ku taal Turgutlu si looga hortago khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed, iskuxir magaalada iyo isu socodka magaalada si ay uga go’do midba midka kale sidaas darteedna loo yareeyo xoojinta taraafikada laga hirgaliyo isku xirka. [More ...]
İGA Bilişim, oo ay dhistay Maamulka Maaraynta İGA Airport, ayaa bixin doonta dhammaan kaabayaasha tiknolojiyadda iyo adeegyada IT-ga ee Airportstanbul Airport-ka cusub waxayna adeegani noqon doontaa adeegga ugu weyn ee laga bixiyo garoonka adduunka. Wadarta 780 [More ...]
Welders oo lagu aqoonsan karo TÜDEMSAŞ
Iyadoo borotokoolka la cusbooneysiiyay TÜDEMSAŞ iyo Gedik Education Foundation (GEV), TÜDEMSAŞ Welding Education iyo Teknolojiyada waxay sii wadi doontaa inay tababarto welwelka tayada caalamiga ah. Maareeyaha Guud ee TÜDEMSAŞ [More ...]
Karsan ayaa gudbiyay tilmaamo 75 ah Bursa. Karsan Gestures waxaa la geeyay Burulaş waxaana 25 loosiiyay isticmaaleyaasha Basaska Gaarka ah ee Dadweynaha ee Burulaş. Munaasabadda gudbinta oo lagu qabtay jaamacadda Burulaş [More ...]
Gaadiidka aan kala-go'in ee Bursa ee 2020
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktas, Gaadiidka Bursa waxaa si weyn u xasiloon doona wadooyinka dhaadheer, 2020 dhamaadka sanadka ayaa gabi ahaanba laga saari doonaa ajendaha taraafikada magaalada, ayuu yiri. Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay ka dhigtay mid dhaqan iyo [More ...]
Shirkadda tareenka ee Jarmalka (DB) ayaa bilaabi doonta dayactirka iyo hagaajinta shaqada bartamaha sanadka soo socda. Tareen xawaare sare leh (ICE) iyo khadadka shaqada ee waaweyn ayaa dhici doona, waxay horseedi doonaan dhibaatooyin gaadiid. Basta Hannover ilaa Würzburg [More ...]
Sabiha Gokcen-3. Garoonka Diyaaradku wuxuu noqon doonaa 45 Minutes
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa sii wada dhismaha 3. Tareen ka baxaya garoonka diyaaradaha Sabiha Gök Airporten oo leh nidaamka maqasyada oo lagu rakibay dariiqa metrooga oo lagu dhisi doono gudaha baaxadda Mashruuca Dhismooyinka Multi-Storey ee Magaalada Istanbul [More ...]
3. Garoonka 31 ee Diseembar
International Air Transport Association (IATA) Xafiiska Xiriirinta Turkey, sida ay sheegtay warbixin la isugu gudbiyo si Airport New dhexe istcimaalka ee Istanbul on October 29 kaliya 'degtey jilicsan' in la sameeyo. Afhayeenka AKP iyo Madaxweynaha [More ...]
Warbixinta wadooyinka ayaa loo gudbiyey maxkamada hanti dhowrka 2017'de buundooyinka iyo wadooyinka waaweyn ee wadarta guud ee 107 million 822 kun 552 TL qiimaha daadinta sharci darada ah, waxay ku dhawaaqday in khasaaraha. Sida lagu sheegay warbixinta, 2017 milyan 138 sanadkii 815 [More ...]
CHP Girgin ayaa laga codsaday mashruuca Tareenka ee Denizli-Aydın-Cine-Yatağan-Milas-Gulluk
Wakiilka Qorsheynta iyo Miisaaniyadda CHP Muğla kuxigeenka Süleyman Girgin ayaa qaadan doona doorka Denizli-Aydın-Çine-Yatağan-Milas-Güllük mashruuca tareenka Mehmet Cahit Turan, kaasoo doorweyn ka ciyaari doona xididdada isku xirka dhaqaalaha Koonfurta Aegean. [More ...]
Erzincan-Trabzon Tareenka wuxuu ku shaqeynayaa horumar
Waxaa la sheegay in daraasaddan ku saabsan mashruuca sahaminta iyo hirgelinta mashruuca tareenka Erzincan-Trabzon ay bilaabeen. madal SözcüSü Şaban Bülbül wuxuu la il daranyahay khasaarihii ka soo gaadhay ilgiliinka tareenka ee Erzincan-Trabzon [More ...]
Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta ee Trabzon Light Rail
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Trabzon Orhan Fevzi Gumrukcuoglu ayaa qabtay kulan qiimayn ah, oo laga sameeyay bayaanno ku saabsan maal-galinta tareenka iyo gaadiidka. NIDAAMKA SIYAASADA CIIDAMADA LIISKA EE LUUQADDA KU SAMEEYSA MADAXWEYNE Gümrükçüoğlu ” [More ...]